सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन -
CompanyHub र सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन
मई 25 मा, 2018, सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमित (GDPR) भनिन्छ एक नयाँ ल्यान्डमार्क गोपनीयता कानून यूरोपीय संघ (ईयू) मा असर गर्छ। GDPR इ EU व्यक्तियों को गोपनीयता अधिकार को विस्तार गर्दछ र उन संगठनों मा नयाँ दायित्वहरु लाई स्थान दि्छ जो बजार, ट्रैक, या ईयू व्यक्तिगत डेटा को संभाला। यसले तपाईंको कम्पनीलाई कसरी असर गर्नेछ?
जीडीपीआर एक यूरोपीय संघमा (नयाँ मई मा प्रभाव मई 25, 2018) को एक व्यापक व्यापक डेटा सुरक्षा कानून हो जुन तीव्र टेक्नोलोजी घटनाहरु को प्रकाश मा व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा, वैश्वीकरण बढयो, र व्यक्तिगत डेटा को अधिक जटिल अन्तरराष्ट्रीय प्रवाह मा मजबूत बनािन्छ। यसले अपडेट गर्दछ र राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा कानुनीहरूको प्याचवर्कलाई वर्तमानमा एक नियमको एकल सेटसँग अद्यावधिक गर्दछ, प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक EU सदस्यको स्थितिमा लागू हुने योग्य।
GDPR लाई विनियमित गर्दछ?
GDPR ईयू व्यक्तिहरूको लागि डेटाको "प्रशोधन" को प्रबन्ध गर्दछ, जुन संग्रह, भण्डारण, स्थानान्तरण, वा प्रयोग गर्दछ। कुनै पनि संगठन जसले ईयू व्यक्तिका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन गर्दछ कानूनको दायरामा छ, चाहे संस्थाले EU मा भौतिक उपस्थिति छ भने। महत्त्वपूर्ण रूपमा, GDPR अन्तर्गत "व्यक्तिगत डेटा" को अवधारणा अत्यन्तै व्यापक छ र पहिचान गरिएको वा पहिचान योग्य व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी समावेश गर्दछ (जसलाई "डेटा विषय" भनिन्छ)।
के GDPR ईयूमा बस्न ईयू व्यक्तिगत डेटाको आवश्यकता छ?
होइन, जीडीपीआरले ईयू व्यक्तिगत डेटा ईयूमा रहन आवश्यक छैन, र यो EU को बाहिर व्यक्तिगत डेटा स्थानान्तरणमा कुनै पनि नयाँ प्रतिबन्धहरू राख्दैन।
CompanyHub GDPR तैयारी
संस्थाहरूले सूचना सुरक्षाको महत्त्वलाई बढावा दिन्छन् - तर GDPR ले बार बढाउँछ। यसले व्यक्तिगत डेटालाई हानिकारक वा अनधिकृत पहुँच वा प्रकटीकरणबाट सुरक्षित राख्न उपयुक्त टेक्नोलोजी र संगठनात्मक उपायहरू लिन आवश्यक छ। हामी हाम्रो आधारभूत संरचना र प्रयोगकर्ता डेटाको सुरक्षा गर्दछौं।
GDPR अनुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर
क्षेत्र स्तर सुरक्षा
शेयरिङ रिपोर्ट गर्नुहोस्
CompanyHub तपाईंको डाटा र अनुप्रयोगहरूको सुरक्षा गर्न सुरक्षाको साथ बनाइएको छ। तपाईं आफ्नो संगठन को संरचना र आवश्यकताहरु लाई प्रतिबिंबित गर्न आफ्नो सुरक्षा योजना पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको डेटाको सुरक्षा तपाइँ र कम्पनी हब बीचको संयुक्त जिम्मेवारी हो। कम्पनीहोब सुरक्षा सुविधाहरूले तपाइँलाई आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको कार्य सुरक्षित र कुशलतापूर्वक सशक्त पार्न सक्षम पार्छ। विभिन्न सुरक्षा योजनाहरू तल छन्:
कम्पनीहबले अमेजन ईक्सक्सिनक्स, आरडीएस, एसक्सएनक्स प्रयोग गर्दछ जुन पहिले नै घोषणा गरिएको छ Amazon द्वारा अनुपालन GDPR सीआईएसपीई कोड आचार संहिता संग।
कम्पनीहब प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो सुरक्षित डेटाबेसमा डाटा यातायात गर्न एसएसएल इन्क्रिप्सन प्रयोग गर्दछ। एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शनका लागि SHA256 एल्गोरिदम प्रयोग गर्दछ।
प्रत्येक ग्राहकलाई CompanyHub मा एक फरक डाटाबेस हुन्छ। त्यसकारण, अन्य प्रयोगकर्ताहरूको डेटाबेसको गलत डेटा जोखिमको कुनै हस्तक्षेप वा सम्भावना छैन
तालिका अनुमतिहरू प्रयोग गर्दै, प्रयोगकर्ताहरूले तालिकाहरू हेर्न, सिर्जना गर्न, अद्यावधिक गर्न वा मेटाउन प्रतिबन्धित गर्न सक्छन्। तालिका अनुमतिहरू तपाइँले विशेष प्रयोगकर्ताहरूबाट तालिकाहरूको सम्पूर्ण मेनूहरू लुकाउन अनुमति दिन्छ ताकि तिनीहरू पनि यो थाहा छैन कि यो तालिका अवस्थित छ भने।
केहि अवस्थामा, तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूलाई तालिकामा पहुँच गर्न चाहन सक्नुहुन्छ, तर त्यो तालिकामा व्यक्तिगत क्षेत्रहरूमा तिनीहरूको पहुँच सीमित गर्नुहोस्। फिल्ड-स्तरीय सुरक्षा-वा क्षेत्रीय अनुमतिहरू - प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्दछ कि एक तालिकामा एक विशेष फिल्डको लागि मान, सम्पादन, मूल्य। तिनीहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई बाट सम्पूर्ण तालिका लुकाउन बिना संवेदनशील खेतहरू सुरक्षित गर्न दिन्छन्।
तालिकाहरू र फिल्डहरूसँग, यदि तपाईं रेकर्ड आफैलाई नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ, रेकर्ड-स्तरीय सुरक्षाले तपाईंलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई केही तालिका रेकर्डमा पहुँच दिन्छ, तर अरूलाई अनुमति दिँदैन। प्रत्येक रेकर्ड प्रयोगकर्ताको स्वामित्वमा छ। मालिकसँग रेकर्डको पूर्ण पहुँच छ। एक पदानुक्रममा, उपयोगकर्ताहरू पदानुक्रममा उच्चतर सधैँ पदानुक्रममा तिनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूसँग समान पहुँच छ। त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् जुन तपाईं रेकर्ड-स्तर सुरक्षा निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ
संगठन साझेदारी सेटिङ्स: पङ्क्ति-स्तर सुरक्षामा पहिलो चरण संगठन साझेदारी सेटिङ निर्धारण गर्ने हो। पूर्वनिर्धारित रूपमा, सबै रेकर्डहरू एक संगठनमा सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि दृश्यात्मक छ। हामी मालिकहरू र प्रबन्धकहरूलाई डेटा लक गर्न संगठन साझेदारी सेटिङहरू प्रयोग गर्न सक्छौं। यो कार्य पछि, तपाइँले अर्को पङ्क्ति-स्तर सुरक्षा सेटिङ्हरू प्रयोग गरी अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई रेकर्डको पहुँच प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ।
क्षेत्र पदानुक्रम: एकपटक तपाईंले संगठन-विस्तृत साझेदारी सेटिङहरू निर्दिष्ट गर्नुभएपछि, रेकर्डमा विस्तृत पहुँच साझा गर्नको लागि तपाईंले एक क्षेत्र पदानुक्रम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एक क्षेत्र पदानुक्रम अनुदान प्रयोगकर्ताहरूले जिप कोड, उद्योग, वा तपाईंको अनुकूलनसँग सम्बन्धित अनुकूलन क्षेत्र जस्ता मापदण्डहरूमा रेकर्डहरूको पहुँच गर्दछ। उदाहरणका लागि, तपाईंले एक क्षेत्र पदानुक्रम सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जसमा प्रयोगकर्ता "उत्तरी अमेरिका" को भूमिकाले "क्यानाडा" र "संयुक्त राज्य" भूमिकाहरूसँग प्रयोगकर्ताहरूको तुलनामा विभिन्न डेटाहरूमा पहुँच गरेको छ।
प्रत्येक रिपोर्ट फोल्डरमा थपिएको छ। प्रयोगकर्ताहरू प्रतिवेदन साझेदारी गरेर केही रिपोर्टहरू हेर्न / सम्पादन गर्न प्रतिबन्धित हुनसक्छन्। तिनीहरू अनुमति हेर्न / सम्पादन गर्न अनुमति दिन वा अनुमति दिन सकिन्छ।
तपाईँले यी क्षेत्रहरूमा सम्पादनहरू ट्र्याक गर्न र मनिटर गर्न केहि तालिकाहरूमा निश्चित क्षेत्रहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ। यी कुनै पनि क्षेत्रहरू परिमार्जन गर्दै त्यो तालिकाको गतिविधिमा एक गैर-मेटिने योग्य गतिविधि थप्छ।
बिर्सनु भएको छ
डाटा प्रशोधन प्रतिबन्ध
कम्पनी हबले तपाईंलाई विभिन्न सुरक्षा कार्यान्वयन गरेर ईमेल सुरक्षा र गोपनीयता नियमहरू पालन गर्न सहयोग पुर्याउने प्रयास गर्दछ जस्तै हामी साइन अप आदि। हामी सहमतिको लागि सोध्दछौं। हामी सहमति स्वीकार गर्दछौं, सहमतिको समय, कानुनी दायित्वहरुको लागि सहमतिको सन्दर्भ। हाम्रो ग्राहकहरूको लागि सजिलो बनाउन हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूको सहमति भण्डारण गर्न, CompanyHub प्रयोगकर्ताहरूको सहमतिको क्षेत्र भण्डारण गर्न अनुकूल तालिकाहरू सिर्जना गर्ने विकल्प दिन्छ। यी सहमति रेकर्डहरू वांछित तालिकाहरूमा रेकर्डहरूमा लिंक गर्न सकिन्छ।
डेटा सुरक्षा र गोपनीयता नियमहरू पालन गर्न, कहिलेकाहीँ ग्राहकहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत डेटा मेटाउन आवश्यक छ।
कम्पनी हबले तपाईंको डाटा मेटाउनको लागि अमीर सेट उपकरणहरू मद्दत गर्दछ। तपाईं हाम्रो गोपनीयता नीति अनुसार तपाईको सफ्टेसन मेटाउन र आफ्नो डेटा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाइँ स्थायी रूपमा डेटा मेटाउन सक्नुहुनेछ। तपाइँले प्रत्येक रेकर्ड र रेकर्ड मेटाउनुहुँदा एक कार्य गर्न पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ग्राहकले आफ्नो सम्पूर्ण खाता मेटाउन चाहानुहुन्छ, एक विकल्प प्रदान गरिएको छ त्यसैले प्रयोगकर्तालाई प्राप्त गरिएको मेटाउने प्रमाणीकरण कोड प्रविष्ट गर्न र हाम्रो नीति अनुसार कम्पनी हबबाट खाता मेटाउन सक्दछ।
जब परिस्थितिहरूले तपाईंलाई त्यसो गर्न आवश्यक छ भने, तपाइँका ग्राहकहरूको डेटा प्रसोधन रोक्न। हामी तपाईंलाई डेटा प्रोसेसको फारामहरू सीमित गर्न मद्दत गर्न मार्गदर्शन दिन्छौं। त्यस तरिका, तपाईं आफ्नो कम्पनीको लागि महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पालन गर्न काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कम्पनी हबबाट डाटा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं प्रक्रिया गर्न चाहानुहुन्छ।
डेटा पोर्टेबिलिटीको लागि विभिन्न विकल्पहरू छन्। तपाईं CSH फाईलहरू कम्पनी हबमा डेटा आयात गर्न APIs आयात गर्नुहोस्, आयात आयात गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्ना ग्राहकहरूलाई विभिन्न डेटा नियमहरूको अनुसार आफ्नो डेटा निर्यात गर्न अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। डेटा विभिन्न तरिकाहरूबाट निकाल्न सकिन्छ जस्तै UI-driven निर्यात, रिपोर्टहरू, REST API। निर्यात ढाँचाहरूमा JSON र CSV समावेश छ।
यसको अतिरिक्त, हाम्रो गोपनीयता नीति हाम्रो गोपनीयताको बारेमा अधिक जानकारी प्रदान गर्दछ, हामीले सङ्कलन गर्ने डेटा, हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ support@companyhub.com।